Dowladda Morooko oo joojisay qaar ka mid ah duullimaadyadii tegi jiray dalkeeda - Hargeele - Wararka Somali State
Dowladda Morooko oo joojisay qaar ka mid ah duullimaadyadii tegi jiray dalkeeda
Rabat-(SONNA)-Marooko oo joojisay duulimaadyada 9 dal si looga hortago faafidda karoona Dowladda Marooko ayaa soo saartay go’aan ku meel gaar ah oo lagu joojinaayo duulimaayada ka imaanaya 9 dal si looga hor tago cudur safmareenka ah ee Karoona Fayras.
Waxaa la joojiyay duulimaadyadii aadi lahaa ama ka iman lahaa dalalka kala ah Austria, Portugal, Sweden, Czech Republic, Ukraine, Germany, Netherlands, Switzerland iyo Turkey.
Arrintan ayaa timid markii wasaaradda caafimaadka ee Marooko ogaatay 21 kiis oo ah nooca cusub ee Karoona Fayras.
Dalka Marooko waxaa hore looga joojiyay duulimaadyada ka yimaada dalalka kala ah Koonfur Afrika, Denmark, Britain, Australia, Brazil, New Zealand iyo Ireland.
Suarez oo ka baxay aamusnaanta kaddib markii uu meel fagaare ah ku weeraray Barcelona
“Griezmann qalad ayuu sameeyay markii uu u dhaqaaqay Barcelona.” – daafac hore Barcelona ah
Ciidamada ammaanka Puntland oo howl gallo qorshaysan ka sameeyay Deegaano ka tirsan Buuralayda Calmadow “Sawirro”
Meydki danjirihii Jaamacadda Carabta ee Soomaaliya oo dibada loo qaaday
Sii hayaha Ra’isulwasaaraha dalka oo kormeeray xabsiga dhexe ee Xamar